शब्द-सिर्जना : महानगरभित्र - मातृका पोखरेल
"के इच्छा छ हजुरलाई ? मम, पिज्जा,सेकुवा
। " उसले मेनु पल्टाउदै भन्यो।
मतिर हेर्दै ऊ अलिअलि मुस्कुराउने प्रयत्न गर्थ्यो ।
त्यसपछि ऊ लामो समय मौन देखियो । मेरो प्रश्न पछि उसको अनुहारमा एउटा त्रासको लहर दौडियो ।
"राणाकी ! "
"कति वर्ष भयो बिबाह भएको ?"
Posted by शब्द-यात्रा at 5:56 AM